China 84 fekitari inouraya uye vanotengesa | Zhongxing
Iyo mishonga inouraya utachiona ine basa rekuuraya hutumbu hwepathogenic mabhakitiriya uye suppurative cocci, inactivating virus nezvimwewo.
Ichi chigadzirwa chakakodzera disinfection yechinhu chepamusoro pevhu, chena zvipfeko, zvipatara zvakashatiswa zvinyorwa.
500 g 84 mabhakitiriya kumberi
500 g 84 inouraya utachiona inodzosera kumashure
84 Iyo inouraya utachiona ine hunhu hunotevera:
1. fomura nyowani isina phosphorus kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye hutano;
2. haigone chete kudzivirira, asi zvakare yakachena uye yakasviba.
84 Disinfectant (Rudzi rwechipiri) chinhu chine chlorine ine utachiona hunoshandiswa kuuraya hutachiona nharaunda nepamusoro pezvinhu. Iine zvine simba zvekusvibisa zvigadzirwa zvinogona kuuraya E. coli. Inokodzera
84 inouraya utachiona inonyanyo shandiswa kudonhedza uye disinfection yenzvimbo, zvipfeko zvichena uye zvinhu zvakasvibiswa muzvipatara mudzimba, mahotera, maresitorendi nedzimwe nzvimbo dzeruzhinji. Maitiro makuru ekushandisa ndeaya:
1. Utachiona hwemidziyo yekudya:
Sanganisa mhinduro yemvura nemvura pachiyero che1: 400 (1 chikamu stock solution + 399 zvikamu zvemvura), soak midziyo kuti iiswe utachiona mumvura yakasanganiswa kwemaminitsi makumi maviri wozosuka nemvura.
2. Surface disinfection yezvinhu zvakajairika:
Sanganisa mhinduro yekutanga nemvura pachiyero che1: 100 (1 chikamu chemhinduro yekutanga + makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emvura), pukuta, pfapfaidza, uye peta pamusoro pechinhu chinofanira kuiswa utachiona nemushonga wakasanganiswa 84 disinfectant kwemaminitsi makumi matatu.
3. Mucheka jena disinfection:
Sanganisa mhinduro yemvura nemvura pachiyero che1: 100 (1 chikamu stock solution + 399 zvikamu zvemvura), svetesa jira jena kuti riiswe utachiona mumvura yakasanganiswa kwemaminitsi makumi matatu, wozoisuka nemvura.
4. Utachiona hutachiona hunosvibisa muchipatara
Shandisa iyo stock solution kusanganisa nemvura muchiyero che1: 10 (1 chikamu stock solution + 9 zvikamu zvemvura) kupukuta zvinosvibisa zvechipatara zvinoda kuiswa utachiona uye nekuisa iyo yakasanganiswa mhinduro 84 disinfectant solution kupukuta, kupopera, mop uye disinfect kwemaminetsi makumi matanhatu, wozosuka nemvura.
Chigadzirwa zita 84 inouraya utachiona
Main ingredients 4.0-6.0% (g / ml) sodium hypochlorite
Sangana nenhamba yakajairwa Mubvunzo / 320803LEK002-2013
Nhamba yekubvumidzwa (Su) Wei Xiaozheng Zi (2012) Kwete 3028-0062
Rinoshanda Kubvisa, disinfection, nezvimwe.
Pashure: Kuzvitsvetera firita mask
Zvadaro: Iodophor mushonga unouraya utachiona
Mabhodhoro 84 Disinfectant
Imba 84 Disinfectant
Chiremba Cotton, Sterilized Cotton Swab, Nursing Pad, Inoraswa Medical Chiso Mask, Mhepo Inofema, Antiviral Mask,